Buy Luxury Foot Massager (135,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
တစ်နေကုန် ထိုင်နေရသူများအတွက် ခြေထောက်ကလေးများကို
နှိပ်ပေးနိုင်မယ့် ခြေနှိပ်စက်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
တစ်နေ.ကို ၁၅မိနစ်လောက် နှိပ်ပေးရုံနဲ. အငြောင်းအငြာပြေပြီး
သွေးသွား သွေးလာ ကောင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပြီး ခြေထောက်နှိပ် Plug ထိုးပြီး ခလုတ်နှိပ်
ယုံနဲ. အဆင့်၎ဆင့်ဖြင့် နှိပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် manual ဖြင့်လည်း နှိပ်စေချင်သော ခြေထောက်နေရာကို
အလွယ်တကူ တစ်ချက်စီ ပြောင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – ၁၃၅၀၀၀ ကျပ်
ဖုန်းမဆက်ချင်ရင် Order form ဖြည့်ပြီးလည်း မှာနိုင်ပြီနော်
အမည်: Luxury Foot Massager